Nepali Christian Bible Study Resources - सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी?
» अध्ययन मालाहरू » विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता » ३-सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी?
सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी?
सृष्टिको बारेमा मैले कसरी थाह गर्न सक्छु? कसरी आकाशहरू र पृथ्वी (अनि ब्रह्माण्ड) अस्तित्वमा ल्याइए? कसरी ठूलो माछा व्हेलको सृष्टि गरियो? चील? गोही? शार्क माछा? जिराफ? हात्ती? डल्फिन? त्यती अग्ला-अग्ला रूखहरू कसरी बनिए? हिमालहरू कसरी बनिएका हुन्? मानिसको सृष्टि कसरी भयो? के मानिस बाँदर जस्तै देखिने प्राणीबाट बिकास हुँदै आएका हुन्? हाम्रा पहिलो मानवहरू कस्ता देखिन्थे? के तिनीहरू बाँदरहरूजस्तै देखिन्थे? के तिनीहरू बुद्धिमानी थिए? कसरी मैले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छु? कसरी मैले सृष्टिलाई बुझ्न सक्छु?
घडी कसरी बनाइन्छ भनेर बुझ्न मैले के गर्नुपर्छ? घडी बनाउनेकहाँ गएर उसले घडी बनाइरहेको अवलोकन गर्नुपर्छ। घडी बनाउने कुशल व्यक्तिले सामग्रीहरू र पार्ट-पूर्जाहरू मिलाएर राख्दै गरेको मैले अवलोकन गर्न सक्छु। त्यो घडी बनाइएको हो भनी म भन्न सक्छु किनभने म त्यहीँ थिएँ! मैले तो काम भएको देखेको छु! गाडी कसरी बनाइन्छ? हवाइजहाज? पानी जहाज? यी कुराहरू निर्माण गरिने ठाउँहरूमा म जान सक्छु र ती कसरी बनाइन्छन्भनी अवलोकन गर्न सक्छु! निपुण मानिसहरूले ती कुराहरूको निर्माण गरिरहेको ठाउँमा बसेर मैले हेर्न सक्छु! तपाईंको आमाले कसरी रोटी पकाउनुहुन्छ? यो कसरी गरिन्छ भनी हेर्नको निम्ति तपाईं रोटी पकाउने प्रकृया अवलोकन मात्र गर्नुपर्छ! उहाँले पकाउँदै गर्नुभएको हेर्नुहोस्! आफैंले हेर्नुहोस् र छिट्टै तपाईंले पनि आफैंले रोटी पकाउन सक्नुहुन्छ! मण्डली भवनको निर्माण कसरी गरिन्छ? यो पत्ता लगाउन तपाईंले गर्नुपर्ने कुरा यहि हो, हेर्नुहोस् र देख्नुहोस्! कामदारहरूले जमिन भत्काएको, जग हालेको र भवन उठाएको तपाईंले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले घडीहरू, गाडीहरू, हवाइजहाजहरू, पानीजहाजहरू, रोटी र भवनहरू कसरी बनाइन्छन् भनी सजिलै जान्न सक्छु किनभने १)ती कुराहरू आज पनि बनाइन्छन् २)ती कुराहरू बनाइएको मैले अवलोकन गर्न सक्छु। तर घाम, जून, तारा, वनस्पती र पशु-पंक्षीहरूको सृष्टि कसरी भयो भनेर बुझ्न भने त्यति सजिलो छैन। किनभने त्यहाँ दुइटा ठूला समस्याहरू छन्—
आजको दिनमा कुनै पनि थोकको सृष्टि हुने गर्दैन।
सृष्टि प्रक्रियालाई म अवलोकन गर्न सक्दिन किनभने संसारको सृष्टि हुँदा म त्यहाँ उपस्थित थिइनँ।
१. आजको दिनमा कुनै पनि थोकको सृष्टि हुने गर्दैन
सृष्टिको कार्य हजारौं वर्ष अगाडी नै सम्पन्न भएको थियो! परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टि कार्यको बारेमा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकको कुन दुई अध्यायहरूमा अध्ययन गर्न सक्छौं? उत्पत्ति ______ र ______ अध्यायहरू। आकाशहरू, पृथ्वी र यसमा भएका सम्पूर्ण थोकहरू सृष्टि गर्न परमेश्वरलाई कति समय लाग्यो (प्रस्थान २०:११; उत्पत्ति १:३१ पनि पढ्नुहोस्)? _____________________ त्यस समयपछि “यसरी _________ र _________ अनि तिनीहरूको सम्पूर्ण _________ __________ सि_______ (उत्पत्ति २:१)।” परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिको काम सिद्ध्याउनुभयो!
आज हामीले थोकहरू सृष्टि हुँदै गरेको देख्न सक्दैनौं; हामीले केवल पहिल्यै सृष्टि भइसकेका थोकहरू मात्र देख्न सक्छौं। हामीले परमेश्वरको सृष्टिलाई देख्न सक्छौं (भजनसङ्ग्रह १९:१) तर परमेश्वरले सृष्टि गरिरहनुभएको चाहिँ देख्न सक्दैनौं। हामीले सृष्टि गरिएका कुराहरू (रोमी १:२०) देख्न सक्छौं तर हामीले सृष्टि हुँदै गरेका कुराहरू देख्न सक्दैनौं। हामीले सृष्टिकर्ताका कामहरू देख्नसक्छौं (भजनसङ्ग्रह ८:३,६) तर हामीले सृष्टिकर्ताले काम गरिरहनुभएको चाहिँ देख्नसक्दैनौं किनभने “सातौं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो __________, जो उहाँले बनाउनुभएको थियो, _______________” (उत्पत्ति २:२)। र “किनकि त्यही दिन उहाँले आफ्नो सबै ________ __________ लिनुभयो” (उत्पत्ति २:३)। हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वस्तु देख्न सक्छौं तर उक्त वस्तु अस्तित्वमा आएको सृष्टि प्रकृया चाहिँ देख्न सक्दैनौं। यो भनेको निर्माण कार्य सकिएको घडी (वस्तु) देखिए जस्तै हो जसको निर्माण कार्य (प्रकृया) चाहिँ देखिएको छैन। म चिडियाखाना गएर बाघलाई हेर्न सक्छु, तर मैले कहिल्यै पनि बाघ बनिरहेको चाहिँ देख्न सक्दिनँ! मैले बिरालोको बच्चा जन्मिरहेको हेर्न सक्छु, तर बिरालोको बच्चा सृष्टि गरिएको मैले कहिल्यै पनि देख्न सक्दिनँ! मैले अचानक मुसाको पासोमा मुसाको मृत्यु भएको देख्न सक्छु, तर मैले मुसाको सृष्टि कहिल्यै पनि देख्न सक्दिनँ! एउटा सानो बालक जन्मिएको देख्न सम्भव छ तर एउटा व्यक्ति सृष्टि गरिएको देख्न असम्भव छ किनभने यो कार्य त हजारौं वर्ष अगाडी एकै चोटिको निम्ति सम्पन्न भइसक्यो (मत्ती १९:४)।
परमेश्वरले मानिसलाई संसारमा ल्याउनुहुने तीन तरिकाहरू छन्। ती मध्ये दुई तरिकाहरू असाधारण तरिकाहरू हुन्—ती एक चोटी मात्र भए र अब उसो फेरि कहिल्यै हुनेछैन। यी मध्ये एउटा तरिकाचाहिँ साधारण तरिका हो—यो तरिकाबाट तपाईं संसारमा आउनुभयो! परमेश्वरको तीन तरिकाहरू यी हुन्:
सृष्टि (उत्पत्ति १:२६-२७; २:७,२१-२२)-आदम र हव्वा (असाधारण)
प्रजनन (उत्पत्ति ५:३-२२)-तपाईं र म (साधारण)
प्रजनन भनेको परमेश्वरले नानीहरूलाई यस संसारमा अभिभावकहरूद्वारा प्राकृतिक जन्मको माध्यद्वारा ल्याउनु हो। तपाईं संसारमा आउनुभएको यसरी नै हो।
देहधारण(लूका १:३१-३७)-प्रभु येशू ख्रीष्ट (असाधारण) देहधारण (शरीरमा परमेश्वर-यूहन्ना १;१४; १ तिमोथी ३:१६) भनेको परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई यस संसारमा कन्या मरियमद्वारा अलौकिक जन्मको माध्यमद्वारा ल्याउनुभएको कार्य हो। हाम्रो मुक्तिदाता संसारमा आउनुभएको यसरी नै हो।
आज मानिसहरू प्रजनन कार्यद्वारा जन्मिनु सम्भव छ तर सृष्टि कार्यद्वारा मानिस बनिएको देखिनु असम्भव छ! आदम र हव्वा सोझै परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका हुन्।
२.सृष्टि प्रक्रियालाई म अवलोकन गर्न सक्दिनँ
केहि हजार वर्ष अगाडी (अब्राहामको समयतिर), परमेश्वरले अय्यूबलाई एउटा चाखलाग्दो प्रश्न सोध्नुभयो: “मैले पृथ्वीका जगहरू बसाल्दा तिमी कहाँ थियौ? तिमीसँग समझ छ भने मलाई बताऊ!” (अय्यूब ३८:४)। यदि परमेश्वरले यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुभएको भए, तपाईंले कसरी उत्तर दिनुहुन्थ्यो? घडी बनिरहेको अवलोकन गर्नलाई, तपाईं त्यहाँ हुनैपर्छ। तपाईंले घडी बनाउने व्यक्तिलाई काम गरिरहेको देख्नु पर्छ र गवाही दिनुपर्छ! सृष्टिको अवलोकन गर्न, तपाईं त्यहीँ नै हुनुपर्छ। तपाईंले सृष्टिकर्तालाई काम गरिरहनुभएको देख्नु पर्छ र गवाही दिनुपर्छ! के यो सम्भव छ? ______________
सृष्टि कार्य हुँदैगर्दा म त्यहाँ उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मैले सृष्टिको बारेमा कसरी जान्न सक्छु?
यसैगरी, यदि तपाईं सृष्टिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उहाँकहाँ जानुपर्छ जो त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईं उहाँकहाँ जानुपर्छ जसले ब्रम्हाण्डको सृष्टिलाई देख्नुभएको छ, जो ती ६ दिनहरूमा भएका हरेक घटनाको गवाही हुनुहुन्छ र जसले तपाईंलाई त्यहाँ साँच्चै के भएको थियो भन्ने कुराको यथार्थ विवरण बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले, सृष्टिको बारेमा जान्न तपाईं निम्नमध्ये एक व्यक्तिकहाँ जानुपर्छ:
(ठीक जवाफलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्)
ख.चार्स डार्विन (१८०९-१८८२)—क्रमविकासवाद सिद्धान्तका पिता
ग.तपाईंको विज्ञान शिक्षक वा वनस्पती विज्ञानको शिक्षक
ङ.एकजना व्यक्ति जो त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो (उत्पत्ति १:१)
तसर्थ सृष्टिको बारेमा बुझ्ने एउटै तरिका भनेको सृष्टिकर्ताकहाँ जानु र उहाँलाई सुन्नु र सृष्टिको बारेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भनी ध्यान दिनु हो। जब एउटा व्यक्तिले सृष्टिकर्ताले बताउनुभएको कुरालाई साँच्चै ध्यानसित सुन्दछ, र जब उक्त व्यक्तिले सृष्टिकर्ताले बताउनुभएको कुरामा साँच्चै भरोसा गर्दछ, तब यसलाई विश्वास भनिन्छ:
“विश्वासैद्वारा हामी बुझ्दछौं—परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए; यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्” (हिब्रू ११:३)।
विश्वासैद्वारा सृष्टि (मानिस) ले कसरी सृष्टिकर्ताले सृष्टि गर्नुभयो भनी जान्दछ! यो अन्धो विश्वास (अन्धकारमा मूर्खतापूर्वक हामफाले जस्तो) होइन बरू जिउँदो र बुद्धिमानी सृष्टिकर्तामाथि राखिएको जिउँदो विश्वास (प्रकाशभित्र उदेकको प्रवेश गरे जस्तो) हो।
सृष्टिकर्तालाई सुन्न नचाहनेहरूलाई विकासवादी (evolutionists) भनिन्छ। उनीहरू पनि विश्वासकै आधारमा हिँड्छन्। तरैपनि, उनीहरूको विश्वास सृष्टिकर्तामा होइन, तर आफैंमा हुन्छ (सृष्टिकर्तालाई भन्दा बढ्ता आफूहरूलाई नै थाहा छ भनी उनीहरू सोच्छन्)। हिब्रू ११:३ को सट्टामा विकासवादहरूको भनाइ यस प्रकारको हुन्छ—
“विश्वासैद्वारा हामी बुझ्दछौं—संसारहरू कुनै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनद्वारा (अलौकिक सृष्टी) नभएर अरबौं वर्ष (विकासवादको ईश्वरलाई धेरै समय चाहिन्छ) को प्राकृतिक प्रक्रियाहरूद्वारा बोट-विरुवा तथा पशु-पंक्षीहरू निर्जीव तत्वहरूबाट एक एक-कोषिय जीव विकास भई क्रमिक रूपमा व्हेल, चराहरू, रेप्टाइलहरू, स्तनधारी प्राणीहरू जस्ता जटिलरूपी जीवहरू विकास भएर अन्तमा वन-मान्छे जस्ता प्राणी विकास भएर अनि अनगिन्ति हजारौं वर्षपछि त्यही नै मानिसमा विकास हुन पुग्यो!! अनि विश्वासैद्वारा हामी बुझ्दछौं यो सब परमेश्वरद्वारा भएको होइन तर संजोगले अर्थात प्रकृतिमा भाग्यको खेलले हुनगएको हो!
तपाईं यसमा नै विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसो गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ! तर सृष्टिवादी वा रचनावादी (सृष्टिमा विश्वास गर्ने मानिस) त्यो हो जसले आफ्नो विश्वास सृष्टिकर्तामाथि राख्न लजाउँदैन।
मेरो विश्वास सृष्टिकर्तामाथि छ जो यस्तो हुनुहुन्छ:
सर्वव्यापी—जब आकाशहरु र पृथ्वी सृष्टि गरिएका थिए, उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो (उत्पत्ति १:१)। अय्यूब त्यहाँ थिएनन् (अय्यूब ३८:४)! क्रमविकासवादीहरू त्यहाँ थिएनन्! सृष्टिवादी त्यहाँ थिएनन्! तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो! त्यहाँ घटेको सबै कुराहरूको गवाही दिन उहाँ व्यक्तिगत रूपमा नै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सृष्टिकर्ता मेरो अस्तित्व भन्दा पनि अधिक समयदेखि हुनुहुन्थ्यो!
सर्वज्ञानी—परमेश्वरलाई सबै थाह छ! उहाँसँग सबै जवाफहरू छन्! सृष्टिको बारे जान्ने कुरामा, उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ! मलाई भन्दा धेरै सृष्टिकर्तालाई थाह छ! उहाँ संसारमा चिनिएका सबैभन्दा विज्ञ वैज्ञानिक भन्दा पनि अत्यन्त विज्ञ हुनुहुन्छ! वास्तवमा, एउटा विद्वान वैज्ञानिकले आफूले भन्दा बढी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ भनी महसुस गर्दछ!
सर्वशक्तिमान—सृष्टिकर्ता सर्व-शक्तिशाली हुनुहुन्छ! यदि तपाईंको साथी आएर ऊ भर्खर गगनचुम्बी भवनबाट हामफालेको हो भनी तपाईंलाई भन्यो भने, मलाई निश्चयसाथ थाह छ तपाईंले उसलाई पत्याउनुहुनेछैन! उसमा यस्तो कार्य गर्ने क्षमता नै छैन! तर यदि परमप्रभुको वचनद्वारा सबै कुरा बनाइएको हो भनी परमेश्वरले तपाईंलाई बताउनुभयो भने (भजनसङ्ग्र ३३:६-९), तपाईंले उहाँलाई सजिलै विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँमा यसो गर्ने सामर्थ्य छ! मानिसको सृष्टिको बारेमा बिचार गर्नुहोस् (उत्पत्ति १:२६-२७): विकासवादीको ईश्वर (दैवसन्जोगको ईश्वर) लाई एउटा मानिस बनाउन ४,०००,०००,००० वर्ष (४ अर्ब) लागेछ! हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ! सो कार्य गर्न उहाँलाई जम्मा एक दिन लाग्यो!
विश्वासयोग्य—तपाईंले सृष्टिकर्तामाथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ! उहाँले कहिल्यै झूट बोल्नुहुन्न (तीतस १:२)। उहाँ कहिल्यै गलत हुनुहुन्न! वैज्ञानिकहरू प्राय: जसो गलत हुन्छन्। एकताका पृथ्वी समतल छ भनी वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्दथे! एक समय उनीहरूले पृथ्वी पुरै सौर्य प्रणालीको केन्द्र हो भनी विश्वास गर्दथे! आज पनि वैज्ञानिकहरूका पुस्तकहरूमा दिनहुँ जसो परिवर्तनहरू र समावेशहरू (updates) गरिनुपर्छ। सृष्टिकर्ताको पुस्तक कहिल्यै पनि परिवर्तन गरिनुपर्दैन र यो जहिल्यै पनि पूर्ण हुन्छ! सृष्टिकर्ताले सँधै सत्य बोल्नुहुन्छ! उहाँले कहिल्यै पनि हामीलाई मूर्ख बनाउने र झुक्काउने प्रयास गर्नुहुँदैन! हामी जहिल्यै पनि उहाँको वचनलाई भरोसा गर्न सक्छौं। येशू ख्रीष्ट धोकेबाज हुनुहुँन्न! अनि येशू ख्रीष्ट विकासवादी पनि हुनुहुँन्न (मत्ती १९:४)। वास्तवमा, येशू ख्रीष्ट स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ (कलस्सी १:१६)!!
यो दु:खको कुरा हो, तर सत्य हो, प्राय: वैज्ञानिकहरू विकासवादी छन् (उनीहरू विकासवादमा विश्वास राख्छन्)। तुलनात्मक हिसाबले निकै थोरै वैज्ञानिकहरू मात्र सृष्टिवादी छन् (जसले सृष्टिमा विश्वास राख्छन्)। तर यो पनि सत्य कुरा हो,
प्राय: वैज्ञानिकहरूले मुक्ति पाएका छैनन् (मत्ती ७:१३-१४)
प्राय: वैज्ञानिकहरू शैतानद्वारा अन्धो पारिएका छन्, जुन सैतान झूट हो र जसले मानिसहरूले सृष्टिकर्ताको बारेमा सत्य कुरा जानेको चाहँदैन (२ कोरिन्थी ४:४)।
प्राय: वैज्ञानिकहरूले बाइबल बुझ्दैनन् किनकि तिनीहरूसित पवित्र आत्मा हुनुहुन्न (१ कोरिन्थी २:१४; यहूदा १८,१९)
प्राय: वैज्ञानिकहरूले परमेश्वरको वचनमाथि शंका राख्ने गर्दछन्, जसरी शैतानले पनि उत्पत्ति ३:१मा गर्यो। सृष्टिवादीले भन्दछ, “किनकि परमप्रभुको मुखले यो भनेको छ” (यशैया ४०:५)।
प्रश्न: तपाई कसको कुरा सुन्नुहुन्छ? सृष्टिकर्ताको कि “प्राय: वैज्ञानिकहरूको”?
“यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, जससँग म अत्यन्त प्रसन्न छु; यि______ कु____ सु____” (मत्ती १७:५)
पाठ ३ को पुनरावलोकन
ठीक कि बेठीक जवाफ दिनुहोस्।
विश्वासैद्वारा हामी बुझ्दछौं—परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए; यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्” (हिब्रू ११:३)।
सृष्टिलाई बुझ्ने चाबी भनेको सरल तरिकाले परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नु हो।
“परमप्रभुको वचनद्वारा आकाश, र उहाँको मुखको सासद्वारा तिनका सारा गणहरू बनिएका हुन्।” (भजनसङ्ग्रह ३३:६)
यदि हामीले सबै कुराहरूको सुरुवातको बारेमा सृष्टिकर्ताले बताउनुभएको कुरालाई बेवास्ता वा इन्कार गरिदियौं भने, कसरी हामीले बुझ्नेछौं भनी अपेक्षा गर्न सक्छौं त? यदि हामीले सत्यलाई इन्कार गर्यौं भने, हामीसँग त्रुटीहरू बाहेक अरू केहि बाँकी हुँदैन।
« सृष्टिकर्ताका दुई पुस्तकहरू
सृष्टिका छ दिन -- दिनहरू थिए कि युगहरू? »